Safarka Karantiil-La’aanta | Quarantine-Free Travel | Unite against COVID-19
U safarka New Zealand | Travel to and from New Zealand
Safarka Karantiil-La’aanta | Quarantine-Free Travel
Safarka Karantiil-La’aanta ka yimid:
Austareeliya (Australia) → New Zealand waa La joojiyay (Suspended)
Fadlan si joogta ah u fiiri bogga Safarka Karantiil-La’aanta Unite Against COVID-19 oo warbixinta ugu dambeyso.
Haddii diyaarinada safarka ay saameyso, waxaad la xiriiri kartaa duulimaadkaaga, wakaalada safarka iyo caymiyaha safarka.
Sidee ayuu Safarka Karantiil-La’aanta u shaqeeyaa?
Hadda, New Zealand waxay leeyihiin qaban qaabada safarka Karantiil-La’aanta ee:
Niue (laakin kaliya ka imaado Niue ee ku socdo NZ)
Safarka Karantiil-La’aanta waa meesha aad ugu socon kartid inta u dhaxeyso wadamada adiga oo aan gelin gooniyeynta la maareeyay ama is gooniyeynta markii aad timaadid. Lagaagama baahno inaad yeelatid baaritaanka laga waayay ee bixintaanka ka hor.
Qof walba ayaa ku safri karo safarka aan karantiil-la’aanta haddii ay buuxiyaan sharuuda u qalmida iyo sharuudaha socdaalka ee wadanka u socdaan.
Heerkan, Safarka Karantiil-La’aanta kaliya wuxuu u dhaxeeyaa New Zealand iyo wadan kaloo gaar ah. Tusaale ahaan, adiga oo ku safri karo Karantiil-La’aanta u dhaxeeyo Jasiiradaha Cook iyo New Zealand, waxaad kadib u baahaneysaa inaad ku isticmaashid 14 maalmood New Zealand ka hor intaadan ku safrin Karantiil-La’aanta.
Illaa lagaa dhaafo, waa inaad xirataa maaskaraha wajiga ama daboolashada markii aad ku safreysid ama ka soo safreysid New Zealand. Waa inaad sidoo kale ku xirataa maaskaraha wajiga oo dhammaan gaadiidka dadweynaha ee New Zealand. Dadka qaar uma baahno inay xirtaan waji daboolashada.
Haddii ay jiraan isbadel ee Heerka Digniinta ee New Zealand ama xaalada isku badesho gobolka Safarka Karantiil-la’aanta, Covid19.govt.nz (websaydkan) iyo websaydka macluumaadka ayaa ku dhawaaqayo.
Haddii dacwadaha bulshada ka dhacdo New Zealand ama gobolka safarka Karantiil-La’aanta, Dowlada way hakin kartaa safarka karantiil-la’aanta si loo qiimeeyo halista, ama way joojin kartaa safarka muddo dheer. Safrayaasha waa inay yeeshaan qorsho oo ay u diyaar garoobaan qorshooyinka safarka ee carqaladoobay.
Wax ka ogow macluumaadka ugu dambeyay ee ku saabsan Safarka Karantiil-La’aanta
U safrida Karantiil-La’aanta New Zealand
Si aad ugu safartid karantiil-la’aanta New Zealand, waa inaad:
buuxiya dhammaan shuruudaha socdaalka
hela baadhitaanka ka horeeya bixida oo aan laga helin gudaha 72 saacadood ee bixintaanka haddii aad ka soo safrayso Australia
ku isticmaashay 14 maalmood buuxdo New Zealand ama wadanka aad u safreysid. Tusaale ahaan, haddii aad ka safreysid Australia waxaad u baahantahay inaad ku isticmaashid 14 kii maalmood ee ugu dambeysay midkood Australia ama New Zealand si aad ugu qalantid safarka karantiil-la’aanta. Waxaad safri kartaa laga bilaabo maalinta 15
laga helin baaritaanka COVID-19 ee 14 ka maalmood ka hor intaadan ka tagin. Haddii aad qabtid, waa inaad lahaataa tallo qoran ee ka imaaneyso dhaqtarka caafimaadka oo ah inaadan markale qaadsiin karin
aadan sugeynin natiijooyinka baaritaanka COVID-19
dhameystir ku dhawaaqida safarka (external link) — kuuma suurtogaleyso inaad raacdid diyaarad haddii aadan dhameystirin
ka jawaab su’aalaha ku saabsan caafimaadkaaga ee bixitaanka. Haddii aad qabtid xaalad caafimaad ee sharaxeyso aastaamo walba ee aad qabi kartid, la imaw shahaado caafimaad si aad uga fogaatid in laguu diido fuulitaanka diyaarada.
Ogow wax badan oo ku saabsan baadhitaanka ka horeeya bixitaanka
Kadib markii aad timaadid New Zealand
Dajiso oo isticmaal app-ka Raadraacaha NZ COVID. Uma baahnid taleefon New Zealand ama New Zealand Apple ama koonto Google si aad u dajisid Raadraacaha NZ COVID.
Ka dajiso App-ka Raadraacaha NZ COVID ee App Store (external link)
Ka dajiso App-ka Raadraacaha NZ COVID ee Google Play (external link)
Guriga joog haddii aad xanuunsantahay
Haddii aad qabtid duri, hargab ama aastaamaha COVID-19, guriga joog oo soo wac:
Qadka caafimaadka oo bilaash ah 0800 358 5453
bixiyahaaga caafimaadka iwi.
Xirfadlaha caafimaadka ayaa kugula talinaayo haddii aad buuxisid sharuuda baaritaanka. Soo wac dhaqtarkaaga ka hor intaadan booqan haddii aad qabtid wax aastaamo ah.
Ku safrida Karantiil-La’aanta Australia
Si aad ugu safartid karantiil-la’aanta Australia, waa inaad:
buuxisaa sharuudaha socdaalka
ku isticmaashaa 14 maalmood buuxdo oo midkood New Zealand ama Australia ka hor intaadan ka tagin — tan waxay la mid tahay inaad safri kartid laga bilaabo maalinta 15 illaa iyo
dhameystirtaa ku dhawaaqida safarka ugu yaraan 72 saacadood ka hor ka tagitaanka New Zealand (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
dan laheyn wax calaamadaha aastaamaha COVID-19
aanad u dhawaanin xaalad la xaqiijiyay ee COVID-19
hubisaa gobolka ama dhulka aad u safreysid inay ogolaanayaan duulimaadyada Karantiil-La’aanta.
Kadib markii aad timaadid Australia
Markii aad joogtid Australia, waxaa jiro dhowr waxyaabo aad u baahantahay inaad sameysid si aad uga illaalisid nafsadaada, qoyskaaga balaaran iyo bulshooyinka COVID-19, oo ay ku jiraan hab dhaqamada nadaafada wanaagsan iyo raadraaca u dhawaanshaha.
Si loo helo warbixin ku saabsan COVID-19, goobaha danaha, xaaladaha safarka (oo ay ku jiraan safarka gudaha) iyo baaritaanka, booqashada websaydka ee gobolka aad ku jirtid. Macluumaadka ku saabsan COVID-19 ee gobol ama dhul ahaan ah:
Dhulka Caasimada Australian (external link)
Dhulka Wuqooyiga (external link)
Koonfurta Australia (external link)
Galbeedka Australia (external link)
Waxaa jiro app-ka raadraaca u dhawaanshaha Australia-oo dhan, laakin inta badan gobolada iyo dhulalka waxay isticmaalaan app-kooda gaarka ah. Waxaad dajisan kartaa oo aad isticmaali kartaa inta badan app-apkan oo leh SIM-kaarka New Zealand. Waxaad u baahan kartaa SIM kaarka Australian ama sharaxaadaha xiriirka Australian si aad u isticmaashid qaar ka mid ah appap-kan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ku haysatid app-kaaga mobeelkaaga oo illaa 1 bilood, haddii aad heshid digniin kadib markii aad ka tagtay gobolka.
Haddii aadan awoodin ama dooran karin isticmaalka app-ka, hubi inaad saxiixdid ganacsiyada iyo goobaha leh nidaamka raadraaca u dhawaanshaha kale.
Dajiso app-ka raadraaca u dhawaanshaha gaarka u ah gobolka:
Dhulka Caasimada Australian (ACT) — Ka fiiri App-ka CBR (external link)
New South Wales — App-ka Adeega NSW (external link)
Dhulka Wuqooyiga — App-ka Fiirinta Dhulka (external link)
Queensland — Fiiri App-ka Qld (external link)
South Australia — App-ka mySA GOV (external link)
Tasmania — Fiiri App-ka TAS (external link)
Victoria — App-ka Adeega Victoria (external link)
Western Australia — app-ka SafeWA (external link) (waxaad u baahan kartaa kaarka SIMka Australian si ay u abuuraan koontada ee app-ka SafeWA)
Haddii aad dareentid xanuun, joog hoygaaga oo u soo wac dhaqtarka wixii tallo ah.
Soo wac fayraska koronaha Qaranka iyo caawinta qadka tallaalka COVID-19 ee 1800 020 080. Wacitaanada bilaash ayay ka yihiin Australia. Waxaad soo wici kartaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood isbuucii.
U safrida Karantiil-La'aan ee Jasiiradaha Cook
Si aad ugu safartid karantiil-la’aanta Jasiiradaha Cook, waa inaad:
ku isticmaashaa 14 maalmood buuxdo oo midkood New Zealand ama Jasiiradaha Cook ka hor intaadan ka tagin — tan waxay la mid tahay inaad safri kartid laga bilaabo maalinta 15 illaa horteeda
aadan sugeynin natiijooyinka baaritaanka COVID-19.
Kadib markii aad timaadid Jasiiradaha Cook
Markii aad joogtid Jasiiradaha Cook, waxaa jiro dhowr waxyaabo aad u baahantahay inaad sameysid si aad uga illaalisid nafsadaada, qoyskaaga balaaran iyo bulshooyinka COVID-19, oo ay ku jiraan hab dhaqamada nadaafada wanaagsan iyo raadraaca u dhawaanshaha.
Ka hel macluumaadbadan websaydyada Dowlada Jasiiradaha Cook (external link)
Jasiiradaha Cook waxay isticmaalaan nidaam kala duwan ee New Zealand. Waxaad u baahaneysaa inaad:
iska diiwaangelisid oo horay u soo qaadatid Kaarkaaga gaarka ah ee CookSafe QR si aad u marisid meelaha aad booqatid
daartaa raadraaca Bluetooth ee app-ka CookSafe+.
App-ka CookSafe+ iyo App-ka Raadraaca NZ COVID ayaa wada shaqeeya. Koodhadka Bluetooth walba (ama 'furayaasha') ee la diro ama laga aruuriyo mobeelkaaga iyada oo la isticmaalayo hal app- waxaa laga geli karaa mid kale. App-ka way wada shaqeeyaan si loo hubiyo inaad heli kartid digniin haddii aad u dhaweyd isticmaalaha app- kale oo laga helay baaritaanka COVID-19.
Macluumaad badan oo ku saabsan Kaarka CookSafe QR (external link)
Ka dajiso app-ka CookSafe+ ee App Store (external link)
Ka dajiso app-ka CookSafe+ app ee Google Play (external link)
Haddii aad dareentid xanuun adiga oo joogo Jasiiradaha Cook, joog hoygaaga oo gasho waji daboolashada, haddii aad mid haysatid. Ha isticmaalin gaadiidka dadweynaha si aad guriga ugu aadid.
Ka soo wac Qadka caafimaadka Jasiiradaha Cook ee 29667 wixii tallo ah.